မိခင်သားအိမ်တွင်းကနေ ကလေးတွေ ဘာတွေသင်ယူရရှိခဲ့လဲ - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » Latest Health Informations » ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း » ရင်နှစ်သည်းချာ ဖေဖေမေမေတို့ကမ္ဘာ » မိခင်သားအိမ်တွင်းကနေ ကလေးတွေ ဘာတွေသင်ယူရရှိခဲ့လဲ
ကလေးများသည် မိခင်ဗိုက်ထဲမှ အပြင်လောကသို့ရောက်ရှိလာသော အချိန်မှသာ လေ့လာသင်ယူမှုများ ပြုလုပ်ကြသည်ဟု လူအများစုက ထင်နေတတ်ကြသည်။သို့သော် မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ထားသော လေ့လာမှုများအရ ကလေးများသည် မိခင်၏သားအိမ်ထဲတွင် နေနေစဉ် အချိန်ကတည်းက သိတတ်နားလည်ကြသည်ဟု ဆိုပါသည်။ သူတို့သည် မိခင်၏၀မ်းကြာတိုက်ထဲတွင်နေစဉ်ကာလတွင် တွေ့ကြုံခဲ့သည်များကို မွေးမွေးပြီးချိန်တွင် မှတ်မိကြသည်ဟု လေ့လာမှုများက ဆိုပါသည်။
ကလေးများသည် မမွေးသေးမီအချိန်ကတည်းက အမေ့ဗိုက်ထဲတွင် လေ့လာသင်ယူနိုင်စွမ်းရှိပါသလား။
မိခင်ဝမ်းကြာတိုက်သည် သူတို့ကလေးများအတွက် အာရုံများကို သိမြင်ခံစားနိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထိုအတွေ့အကြုံများကို အခြေခံပြီး မွေးလာချိန်တွင် ကလေးများသည် လောကကြီးတွင် ကြီးပြင်းလာရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ ကလေးကိုယ်ဝန် ၁၀ ပတ်ခန့်မှစပြီး သူ့ခြေလက်ကလေးများဖြင့် ဗိုက်ထဲတွင် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ကလေးအသက် ၂၃ ပတ်တွင် အကြားအားရုံများကို စတင်ခံစားနိုင်ပြီဖြစ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ရှိကြားနေသောအရာများကို တုန့်ပြန်နိုင်စွမ်းများ ရှိလာပြီဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် အရသာခံအာရုံများဖွံ့ဖြိုးလာပြီး မိခင်စားလိုက်သောအစားအစာများကို အရသာခံနိုင်လာပြီဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် မိခင်၏ဗိုက်ကို အပြင်မှ ထိလိုက်လျှင်လည်း ကလေးငယ်ကသိပြီး တုန့်ပြန်နိုင်စွမ်းရှိနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် အပြင်ဘက်မှစကားပြောခြင်း၊ သီချင်းများဆိုပြခြင်းဖြင့် ကလေးငယ်၏ အသိဥာဏ်ကို ပိုပြီးဖွံ့ဖြိုးအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ထို့ကြောင့် အချို့သော သုတေသနပညာရှင်များက ကိုယ်ဝန်အသက် ၆ လခန့်တွင် ကလေးအား ပုံပြင်များပြောပြခြင်း၊ သီချင်းများဖွင့်ပြခြင်းသည် ကလေးငယ်အား ၀မ်းဗိုက်ထဲတွင်ရှိနေချိန် နားလည်သိတတ်နိုင်စွမ်းများကို တိုးမြင့်လာအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်သော နည်းများဖြစ်ကြောင်း ပြောထားပါသည်။ သို့သော် မမွေးသေးသော ကလေးငယ်အား သင်ကြားပြသခြင်းအားဖြင့် ကလေးများသည် မွေးပြီးအချိန်အထိ စွဲမြဲစွာ မှတ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း လေ့လာရပါသည်။
ကလေးငယ်သည် မိခင်၏၀မ်းဗိုက်ထဲတွင် မည်သို့သော အရာများကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်သလဲ။
သံစဉ်များကိုနားဆင်နိုင်သော အကြားအာရုံများ ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်း
အချို့သော လေ့လာမှုများအရ ကလေးများသည် ၀မ်းဗိုက်ထဲတွင် အကြားအာရုံများ ဖွံ့ဖြိုးလာချိန်တွင် အသံအချို့ကို မှတ်မိနိုင်ကြောင်း ပြောပါသည်။ သားအိမ်ထဲတွင်ရှိနေသော ကလေးသည် ပထမဦးဆုံး မိခင်ပြောသော စကားသံများကို လေ့လာနိုင်ပါသည်။ သိပ္ပံ ပညာရှင်များ၏လေ့လာချက်အရ ကလေးများသည် မိခင်ဘာသာစကားများကို နိုင်ငံခြားဘာသာစကားများထက် ပိုမိုလျှင်မြန်စွာ လေ့လာနိုင်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ထို့ပြင်ကလေးများသည် စကားများ၏ ကာရံစည်းချက်များ၊ အသံများကို စကားတစ်လုံးချင်းစီထက်ပိုပြီး လေ့လာနိုင်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
ကလေးငယ်သည် သားအိမ်ထဲတွင်၇ှိနေစဉ် မျက်လုံးများကို မဖွင့်နိုင်ပါ။ ကလေးငယ်၏မျက်လုံးများသည် ကိုယ်ဝန်အစောပိုင်းကာလများတွင် စတင်ဖွံ့ဖြိုးပြီး ကိုယ်ဝန်အသက် ၇ လ ခန့်ရောက်မှမျက်လုံးများ ဖွင့်နိုင်ကြပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကလေးငယ်သည် အလင်းရောင်မရှိဘဲ သို့မဟုတ် အလင်းရောင်အနည်းငယ်ရှိရုံမျှနှင့် အရာဝတ္ထုများကို မြင်နိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ သို့သော် ကလေးများသည် အလွန်လင်းသော အလင်းရောင်များကို ခံစားရလျှင် ထိုအလင်းများကို သွေဖည်ရာသို့ ချက်ချင်းလှည့်သွားတတ်ကြောင်း အချို့သော ဆရာဝန်များက ဆိုပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကလေးများသည် အပြင်ဘက်မှလာသော အလင်းရောင်များကို အရောင်ဖျော့ဖျော့ ခံစားမိသည်ဟု သံသယဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်သည် ကလေးရော မိခင်ပါကျန်းမာစေရန် စားသုံးရာတွင် မိခင်စားလိုက်သော အစားအစာများကို ကလေးကလည်း အာရုံခံနိုင်ပါသည်။ ၇ လ ၊ ၈ လခန့်ဝန်းကျင်တွင် သန္ဓေသား၏ အရသာခံအင်္ဂါများ စတင်ဖွံ့ဖြိုးလာပြီး ထိုအချိန်မှ ၁၄ ပတ်အတွင်း ခါးသော ၊ ချိုသော ၊ချဉ်သော ၊ ငံသော အရသာများကို ခံစားနိုင်လာကြောင်း သုတေသီများက ဆိုပါသည်။
အချုပ်ဆိုရသော် ကလေးငယ်များသည် မိခင်ဗိုက်ထဲတွင် လေ့လာခဲ့သော အရာများနှင့် မွေးပြီးချိန်တွင် လေ့လာသင်ယူနိုင်မှုများသည် ဆက်စပ်လျက်ရှိကြောင်း ယနေ့ခေတ်ဆရာဝန်များက ဆိုပါသည်။ ကိုယ်ဝန်နှောင်းပိုင်းကာလများတွင် သန္ဓေသားသည် သူထိတွေ့ရမည့် အပြင်လောကနှင့် ဆက်စပ်ပြီး လေ့လာသင်ယူနိုင်စွမ်းများ ပိုတိုးလာကြောင်းတွေ့ရပါသည်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ မတျ 20, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း မတျ 20, 2018
What Babies Learn In the Womb.http://www.parenting.com/article/what-babies-learn-in-the-womb. Accessed December 11, 2016.
5 Amazing Things Unborn Babies Can Do in the Womb.
http://www.lifenews.com/2015/04/21/5-amazing-things-unborn-babies-can-do-in-the-womb/. Accessed December 11, 2016.
. Accessed March 21, 2017.
Chest and Shoulder Stretch. http://www.webmd.com/fitness-exercise/chest-and-shoulder-stretch. Accessed March 21, 2017.
ဘယ်သူသိမလဲ ကလေးလေးတွေလည်း စိတ်ဖိစီးမှုရှိနေနိုင်တယ်ဆိုတာ